Muwaadin Soomaaliyeed oo lagu toogtay dalka Koonfr Afrika - Iftiin FM
Muwaadin Soomaaliyeed oo lagu toogtay dalka Koonfr Afrika
by Iftiin FM Reporter June 23, 2022 June 23, 2022
Kooxo Burcad Koonfur Afrikan ah ayaa la soo sheegaya in ay manta Maanta gudaha dalkaas ay ku dileen muwaadin Soomaaliyeed oo kamid ahaa dadka Ganacsi ahaan u tegay dalkaas, iyaga oo dilka kadib goobta ka baxsaday.
Kenya oo manta laga diiwaangeliyey kiisas cusub oo Cudurka Corona.
Muwaadinka Soomaaliyeed o lagu Magacaabi jiray Cabdi Sheekh Maxamed ayaa la soo sheegaya in kooxaha Burcadda ah ee toogteen, isaga oo Gaari rooto ku iibinayo, xilli uu ku sugnaa Xaafadda Wesbank oo ka tirsan Magaalada Cape Town ee dalkaasi Koonfur Afrika.
Kenya oo laga helay kiisas badan oo Cudurka Corona
Guddiga Miisaaniyadda iyo qoondeynta ee aqalka barlamaanka dalka oo ka hadlay miisaaniyada sanadka.
Tababaraha Man United oo ka hadlay Mustaqbaalka Kooxdiisa